Soo degso CrusaderF8 v1.00 FSX & P3D - Rikoooo
downloads 10 209
Laborie Roland, Laurent correia, Jean Pierre Langer, Jean Pierre Bourgeois, FSX cusbooneysiin uu sameeyay Danny Garnier
Aad iyo aad u faahfaahsan oo faahfaahsan add-on waxaa sameeyay Roland Laborie (Faransiis). Markii hore waxay ahayd FS2004 laakiin waxaa mahad leh saaxiibkeen Danny Garnier hadda waa la jaan qaada (deked) FSX or Prepar3D. Waxaa ka mid ah koontooriyo cajiib ah (VC), laba iyo toban dib u dayactir iyo noocyo kala duwan, dhawaqyo caadiya, animations (dab, bambooyin, gantaallo, iwm), saamayno (gubis ka dib, iwm) iyo waxyaabo kale oo qurux badan.
The F-8 Salibiiga (asal ahaan F8U) waa diyaarad a dagaalka supersonic dhisay by Vought waayo, Maraykanka, iyo saarnaa markab xambaara dayuuradaha. Waxaa lagu gartaa tubada cirka ah oo airfoil dhacdooyinka variable ah sanka. Inkastoo ay culays dheeraad ah ay sabab u tahay qalabka badda, waxay ku tusaysaa qaab la mid ah sida ay dhigiisa dhulka ku salaysan, ee North American F-100 Super Sabre.
Hoos waxaa ku yaal, dukumintiga oo dhammaystiran oo Faransiis ah oo leh sawirro (sidoo kale lagu daray leh add-on)
Repaints iyo Qaybaha
Qore: Laborie Roland, Laurent correia, Jean Pierre Langer, Jean Pierre Bourgeois, FSX cusbooneysiin uu sameeyay Danny Garnier